गगन थापाले केपी ओलीलाई यस्तो प्रश्न सोधेपछि सामाजिक संजालमा मच्चियो यस्तो बबाल , आखिर के सोधे त ?? – PathivaraOnline
Home > समाचार > गगन थापाले केपी ओलीलाई यस्तो प्रश्न सोधेपछि सामाजिक संजालमा मच्चियो यस्तो बबाल , आखिर के सोधे त ??
गगन थापाले केपी ओलीलाई यस्तो प्रश्न सोधेपछि सामाजिक संजालमा मच्चियो यस्तो बबाल , आखिर के सोधे त ??
admin April 11, 2018 समाचार 0
काठमाडौं, २८ चैत । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले भारत र चीनबीचमा रेलवे बनाउन आवश्यकै नरहेको दाबी गरेकाछन् । उनले प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षी योजना रेलमार्ग र जलमार्ग जनतालाई भ्रममा पार्ने खेल भएको बताएका छन् । एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सीजले राजधानीको पर्यटन बोर्डमा आयोजना गरेको जलयात्रा वर्तमान र भविष्य विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थापाले यस्तो आशंका ब्यक्त गरेका हुन् ।
Nepali Congress leader Gagan Thapa speaking ataprogram organised to support quake-affected building of Central Deaf Higher Secondary School in Naxal on Monday, December 28, 2015. Photo: RSS
उनले हवाई अड्डा, पानी जहाज ल्याउने र रेलवे बनाउने कुराको कारण स्पष्ट बताउनुपर्ने बताए । उनले भने ुहामीले रेलवे बनाउने हामीले पानी जहाज ल्याउने हामीले हवाइ अड्डा बनाउने, बनाउने भन्दै गर्दा केका लागि बनाउने उनले भने ? उनले नेपालमा बाटो नै निर्माण नगरी भारत र चिनमा सामान बेच्न रेल ल्याउंछु भन्नु भ्रममा पार्ने खेल भएको बताए ।
आफू रेलमार्गको विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै थापाले भने नेपालमा आउने रेललाई हामी भरेर पठाउन सक्छौ कि सक्दैनौ ?
दुई देशबीच अर्बौको व्यापार भइरहेको बेला रेलवे र जलमार्ग काम लाग्ने कुरो नभएको उनको भनाई छ । ‘हान्ड्रेड बिलियन युएस डलरको टार्गेट राखेर व्यापार चलिरखेको बेला यो काम छैन’ थापाले भने।
कांग्रेस नेता थापाले कृषि र पर्यटनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले विकासका लागि हावाको गफ मात्र नभएर समृद्धिको सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे
अचानक राजिनामा दिएर बसेका डिआइजी रमेश खरेलको बारेमा आयो यस्तो खबर
कोरोना कहरले रोजगारी छाडेर घर फर्किँदै सुदूरपश्चिमेली !(भिडियो सहित हेर्नुहोस)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर चाइनाको बोइङ उडेपछि…
नाकाबन्दीमा भारतसामु नझुककाे ओली सरकार, फेरि लियो उस्तै अडान्!